भनिन्छ– एउटा खुट्टाले दुई वटा डुंगा चढ्नु हुँदैन । यसको अर्थ हो- एक जनाले धेरै पेशा नपनाउनु । तर सुर्खेतमा जन्मेकी एक साहसी महिला छिन् जसले तीन ओटा फरक फरक विधामा एकैपटक यात्रा तय गरिरहेकी छन् । उनी हुन्- नन्दा बश्याल ।
जो अहिले खेलाडी मात्रै नभएर कलाकार तथा महिला अधिकारकर्मीको भूमिकामा सशक्त रूपमा देखा परेकी छन् । सुर्खेत जिल्लामा सबैभन्दा पहिलो महिला तेक्वान्दो खेलाडीको रूपमा परिचित नन्दा वीरेन्द्रनगर ६ सुर्खेतमा जन्मेकी हुन् । विगत २६ वर्षदेखि खेलकुद तथा कलाकारिता क्षेत्रमा अनवरत रूपमा संघर्ष गर्दै आइरहेकी नन्दा विगत आठ वर्षदेखि महिला अधिकारकर्मीको रूपमा समाजमा योगदान पुर्‍याउन तल्लिन छिन् भन्दा अनौठो नहोला ।
एक्ली तेक्वान्दो खेलाडी
उतिबेला सुर्खेतमा रंगीन टेलिभिजन आइपुगेका थिएनन् । सादा टेलिभिजनमा देखाइने हरेक लडाईंमा पुरुष मात्रै देखाइने गरिएको हुन्थ्यो । उनी आफूलाई केटीको रूपमा लिने गर्थिनन्, बरू आफू केटा नै हौं भन्ने लाग्थ्यो र केटाहरूसँगै विभिन्न खेल खेल्ने उनको बानी नै परेको थियो । ‘केटी भएपनि आफू आत्मरक्षा गर्न सक्ने हुनुपर्छ । लडन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा मनमा लागिरहन्थ्यो । ठूलो भएपछि प्रहरी हुने, ड्रेस लगाएर देशको रक्षा गर्ने भावनाले मनमा डेरा जमाउँदै गयो । यो ६ कक्षामा जन माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दाको कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, 'प्रहरी हुनको लागि खेल खेल्नुपर्ने, बलियो हुनुपर्ने थियो । उतिबेला सुर्खेतमा खेलहरू खेलिने भनेको रंगशालामा नै हुन्थ्यो । शुरूमा मैले तेक्वान्दो सिक्ने अठोट लिएँ ।’
खेलप्रतिको मोह उनको यति धेरै थियो कि घर आउँदा र जाँदा बाटोका रुखमा पनि किक हान्ने, भित्तामा ब्याक किक हान्ने, बाटोमा ढुंगा देख्दा फुटाउने सोच आउने गर्द्थ्यो । उनी त्यतिेबेला भर्खर १२ वर्षकी थिइन् । 'त्यो बेलाको समाज अहिलेको जस्तो खुला समाज थिएन । छोरीलाई सकेसम्म घरबाहिर नपठाउने चलन थियो । यद्यपि मलाई मेरो घरपरिवारबाट भने साथ र सहयोग भने मिलिरह्यो,' उनी सुनाउँछिन्, 'तेक्वान्दो खेल्दा मलाई आमाले साथ दिनुहुन्थ्यो । केटी मान्छे बलियो हुनुपर्छ । प्रहरी नै बन्नुपर्छ भन्ने आमाको चाहना थियो । आमा अमृता बश्याल र हजुरबुवा कालुराम बश्यालका प्रेरणाका कारण म खेल क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा प्रवेश गर्न पाएकी हुँ ।’
उनले ताइक्वान्दो खेल्न थालेको दुई वर्ष मात्रै भएको थियो । त्यतिबेला उनको सामुन्ने सायद नेपालमै पहिलोपटक अनौठो घटना घट्यो । खेल्दा खेल्दै दैलेखका कर्भड हलमा २०५२ सालमा सञ्जय थापा मगरले अर्को खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धामा लड्दालड्दै ज्यान गुमाए ।
‘शुक्रबारको दिनमा दुई जना लडनुपर्ने अवस्थामा उहाँको ज्यान नै गएको हो । एकले आक्रमण गरेर टाउकोमा चोट लागेको र भुइँमा लडेको, त्यहीँ मृत्यु भएको हो । भोलि चोटपटक लाग्यो, मृत्यु भयो भने पनि आफैं जिम्मेवार हुने भन्ने हामीले कागज गरेका हुन्छौं ।’
उनी स्मरण गर्छिन्, ‘त्यसपछि घरपरिवारबाट थोरै दबाब आयो । त्यतिबेला पनि हिँड्नेलाई ठेस लाग्छ भनेर आमाले नै भनेका कारण मैले खेल क्षेत्रमा निरनतरता दिने अवसर प्राप्त गरेँ ।’
केरा खाएर २८ केजी
२०५२ सालमा बुटवलमा राष्ट्रिय गेम भयो । उतिबेला उनको तौल जम्मा २५ केजी मात्रै थियो । त्यहाँ खेल खेल्दा २८ केजी हुनैपर्ने थियो । उनी केरा खाएरै भएपनि २८ केजी तौल पुर्‍याउन सफल भइन । उतिबो सुर्खेतमा ६ जना खेलाडीको खेल्न जाने सम्भावना भएपनि उनी बाहेक अन्य पाँच जना छनोट नै भएनन् । अरू सबै पुरुष नै थिए । उनका गुरु भुवन थापाले उनलाई बुटवल लगेर गएका थिए । ‘पुरुष महिला छनोट गर्ने भएपनि म मात्रै छनोट भए । त्यतिखेर द्वितीय मेडल ल्याएँ । जीवनमा पहिलो पटक मेडल तक्मा लाउने सपना पूरा भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बुटवलमा लगाएको मेडल सुर्खेत आएपछि मात्रै खोलेको थिएँ । हराउँछ कि चुट्छ वा कसैले चोरेर लग्छ कि भन्ने लागेर रातभरि नै सुतिनँ । जीवनको पहिलो मेडल, अहिले पनि त्यो मेडल म सँग सुरक्षित नै छ ।’
विसं २०५४ सालमा उनले व्ल्याकबेल्ट प्राप्त गरिन् । 'राजा वीरेन्द्रको जन्मदिनको अवसर पारेर मैले बेल्ट लिएको हो । त्यतिबेला काठमाडौंमा नै बेल्ट पाइन्थ्यो । त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर मैले गोल्ड मेडल पनि जितें,’ उनी भन्छिन् ।
हाल उनी ब्ल्याकबेल्ट पाँचौं डान, तेक्वान्दो संघको केन्द्रीय सदस्य, तेक्वान्दो संघको महिला विभागको प्रमुखको रूपमा कार्यरत छिन् । ‘आजसम्म अफिसियल्ली खेलभन्दा आमन्त्रित खेलहरू धेरै खेलियो । चार वर्षमा वा तीन वर्षमा हुने सरकारद्वारा आयोजना गरिने खेलहरूमा प्राय: सहभागिता जनाएको छु,’ उनी भन्छिन्, ‘सन् २०१६ मा एसियन तेक्वान्दो हांगमादान गोल्ड मेडल, ब्याक किक विद्यामा गोल्ड मेडल प्राप्त गरेकी छु । अक्टोबर १९ मा भएको थानपा इन्टरनेश्नल तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा गोल्ड मेडल, इन्डोनेशियामा भएको नोभेम्बर २८ मा सिल्भर मेडल प्राप्त गरेकी छु ।’ उनी तेक्वान्दोकी कुशल प्रशिक्षक पनि हुन् ।
उनी तेक्वान्दोको विद्यार्थी भएका कारण कसैसँग पनि डराउने कुरा थिएन । उतिबेला काठमाडौंमा पढ्न जाँदा बसमा यात्रा गर्दा उनीमाथि दुर्व्यवहारको प्रयास हुन्थ्यो । ‘नेसनल गेम सकेर साफतर्फको क्याम्पमा हामी बसेका थियौं । माइक्रोमा जाँदा एक पुरुषले दुर्व्यवहार गर्नुभयो । गोंगबुमा उक्त व्यक्तिमाथि आक्रमण गरें ।'
क्यासेटमा एक्लै नाच्ने कला भित्राउने नन्दा
उनी सानैमा पनि गीतको तालमा नाच्ने गर्थिन् । उनलाई अभिभावकले भनेअनुसार खुट्टामा उभिने भएदेखि नै नाच्न थालेकी थिइन् रे ! कलाकारिता सिंगार रसमा गर्नुपर्ने, मोडल भनेपछि सबैको नजर पर्ने, बलियो भएर हिँडनु पर्ने उनको बुझाइ छ । उनी आफ्नो रगतमा नै नृत्य नै छ जस्तो महसूस गर्छिन् । ‘सानैदेखि तालमा राम्रै नाच्थेँ रे ! देउसी खेल्दा बोकेर दाइ दिदीले लिनुहुन्थ्यो ।'
बालमन्दिरमा मुखैले गीत गाएर नाच्दा आफू पहिलो भएको उनले बताइन् । क्यासेटमा नाच्नुपर्छ । सिंगल नृत्य गर्नुपर्छ भन्ने कला सुर्खेतमा आफूले भित्र्याएको उनी दावी गर्छिन् । पुराना दिन सम्झिन्छिन् उनी, 'त्यतिखेर स्टेजमा नाच्न पाए राम्रो हुन्थ्यो । म वागिना समूहमा आवद्ध भएँ । उहाँहरूसँगै हिँडियो । जिल्लामा जहिल्यै प्रथम हुने, क्षेत्रमा हामी पहिलो, राष्ट्रिय स्तरका लोक नृत्यमा दश वर्ष प्रथम भएका हौं ।’
उनी नृत्य मात्रै गर्थिनन् । नृत्य निर्देशक पनि हुन् । ‘मैले गरेको कोरियोग्राफरबाट बेस्ट डान्स डाइरेक्टर उपाधि पाएकी थिएँ । ४ महिनाअघि कतारमा बेस्ट मोडलको अवार्ड पाएँ । सगरमाथा म्यूजिक अवार्डमा अभिनयबाट बेस्ट एक्टरको मेडल पाँए,' उनी प्रफुल्ल हुँदै सफलता सुनाउँछिन्, ' ‘मेरो आफ्नै म्यूजिक कम्पनी छ । काजोल म्युजिक कम्पनी २०७० सालमा खोलेकी हुँ ।’
आँखा जुध्यो भन्ने उनको भिडियो बजारमा आएको छ । अभिनेता दिलिप रायमाझीसँग उनले अभिनय गरेकी छन् । 'सानो भयो मादलु' नामक तीज गीत उनको आफ्नै आवाजमा छ । मोडलिङ पनि उत्तिकै जमेकी छन् ।
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने झ्याइँकुटी झ्याईंमा बस्यालले आठ वर्ष काइँलीको भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छन् । यद्यपि उनलाई पर्दा भन्दा स्टेज कार्यक्रममा नै बढी आनन्द आउने गर्छ रे !
महिला अधिकारका लागि‘सिस्टर नेपाल’
उनी कार्यक्रमकै लागि देश तथा विदेश चहारेकी छन् । विश्वका दर्जन बढी देशमा पुगिसकेकी बश्यालले नेपाली महिलाको अवस्थाबारेमा सोच्न थालिन् । अन्य देशका महिला र नेपालका महिलामा धेरै फरक रहेको उनले बुझिन् । महिलालाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ र पीडामा भएका महिला दिदिबहिनीहरूलाई कसरी खुशी दिन सकिन्छ भन्ने सोच आउन साथ उनले 'सिस्टर नेपाल' नाम संस्था स्थापना गरिन् सात वर्षअघि काठमाडौंमा ।
‘सात वर्षदेखि संस्थाले काठमाडौंमा कार्यक्रम गरिरहेको छ । यो संस्थाले महिलाहरूको हक अधिकारको लागि काम गर्दै तथा सम्मान गर्ने काम गर्दै आइरहेका छौं । कतिपय महिलाहरू मानसिक तनाव लिएर बसेका हुन्छन् । अन्य संस्थासँग मिलेर उनीहरूलाई तालिम दिलाउने काम गरिरहेको छौं । महिला महिला एकजुट भएर स्वास्थ्य, सरसफाइका विषयमा जनचेतना जागरण गर्ने गर्छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले २५ देखि २६ जनासम्म महिलालाई उद्दार तथा राहत दियौं होला ।’
उनी जिन्दगीलाई चुनौती र प्रतिस्पर्धा नै हो भन्ने रूपमा बुझ्ने गर्छिन् । ‘चुनौती र प्रतिस्पर्धा नै नभए मजा नै आउँदैन । अरूभन्दा फरक काम गर्नुपर्छ । महिला प्रमुख भएपछि एसियामै पहिलो खेल आयोजना गरेको थिएँ । सबै महिला कर्मचारी खेलाडी खेल्ने, पुरुष दर्शक बनेर हेर्ने प्रतियोगिता आयोजना गरेकी थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले एकैचोटी माथि जान, धेरै गर्न खोजेको छैन । मेरो प्रदेशका खेलाडीहरूलाई खेलकुदमा टिक्नका लागि धेरै कुरा दिन सकिन्छ ।'
उनी सधैंभरि मोडल हुन नसक्ने कुरा स्वीकार्छिन् । ‘अब म निर्देशनको क्षेत्रमा आउन सक्छु । राम्रो डकुमेन्ट्री बनाउन सक्छु । म कला क्षेत्रबाट टाढा हुन सक्तिनँ ।’
उनले प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रलाई अघि बढाउन ठूलो पहल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘प्रदेश भरिमा एक राम्रो इन्डोर हल छैन । वर्षायाममा खेलाडी ठप्पै हुन्छन् । उसुमा एक जना मात्रै कर्णालीबाट सागमा खेलाडी छनोट भए । २७ गेम त्यहाँ खेलिनेछन् । हल छैन, सेवा सुविधा छैन,' उनले दुखेसो पोखिन् ।
उनी प्रश्न गर्छिन्- दुई महिना तालिम लिने ६ महिना रेष्ट गरेर कसरी मेडल ल्याउन सकिन्छ र ?’
राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न खेलकुदमा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।